Archive du 20180723
Fifidianana fihodinana faharoa Hifampitady Ravalomanana sy Rajoelina
I Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina no tsara toerana indrindra, mety hivoaka amin’ny fifidianana filoha ny 7 novambra, ary hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra,
Fanjakana HVM Miketrika ny hanemorana ny fifidianana…
Manomboka tsy marisika indray hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 7 novambra 2018 ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM.
Kandida maro manam-bola be Toran-kovitra ry Rajao mianakavy
Mety hisy ihany ny kandida filoha maromaro hifanahantsahana ara-bola amin’ny kandidam-panjakana, fa tsy ny an’ny HVM ihany no hisongadina eto.
Sylvain Rabetsaroana “Aza ahodinkodina intsony ny sain’ny vahoaka…”
Nitondra ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena i Sylvain Rabetsaroana, loholona teo aloha. Navoitrany ny tokony hirosoana amin`ny fifidianana malalaka, andraisan`ny rehetra anjara ary tsy manilika satria izany no demokratika tanteraka.
Praiminisitra Ntsay Christian Manomboka manao kopisoroka ?
Tsikaritra ho toa manomboka be resaka tahaka ny praiminisitra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier ny praiminisitra ankehitriny Ntsay Christian.
Pastera Mailhol Vonona hiady amin’ny kolikoly
Fahombiazana tanteraka ny dian’ny pastera Mailhol tany Mahajanga ny alakamisy lasa teo, kandida hatolotry ny antoko Gideona Fandresena Fahantrana eto Madagasikara amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Tena maditra mihitsy ity Jean ity aa ! Izay dia vao mainka rangitina indray dada sy neny.
Misaona indray ny fanaovan-gazety Lasa koa i Zo Rakotoseheno
Herinandro vitsy taorian’ny fodiamandrin’ireo Olobe miisa 2 teo amin’ny tontolon’ny fanaovan-gazety, Charles Andriatsitohaina sy Lantomalala Rasata, izay nialohavan’ny fahalasanan’ny mpanao gazety ara-panatanjahantena mbola tanora vao herotrerony, Rojo Andriatsarahoby,
Minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra Ny fifampiresahana ihany no hahafahana mandroso, hoy ny SG vaovao
Tontosa ny zoma teo teny Antaninarenina ny fifamindram-pahefana teo amin’ny sekretera jeneraly vaovaon’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN) Atoa Briand Andrianirina sy Ramatoa Roby Nadia, sekretera jeneraly teo aloha.
Toetr’andro Mbola hitohy hatramin’ny volana Aogositra ny hatsiaka
Tena miaina ao anatin’ny hatsiaka tanteraka isika ankehitriny. Misy mihitsy aza erika mifafy indraindray izay nambaran’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro eny Ampandrianomby fa ivon’ny ririnina no mahatonga izany.
Fivarotana olona Lehilahy 4 voasambotra tany Ankazomiriotra
Lehilahy niisa 4 no nosamborina tao Ankazomiriotra any Andrefan’i Betafo ny 19 jolay 2018 teo noho ny resaka fivarotana olona.
Holafitry ny vadintany sy ny mpanao lavanty Lany filoha ny Me Rasamimaka Mahefalahy
Nanao ny fivoriambeny ny teo anivon’ny holafitry ny vadintany sy ny mpanao lavanty Malagasy ny alakamisy sy ny zoma teo. Nandritra ity fihaonambe ity no nandinihan’izy ireo ny zava-misy manodidina ny asan’izy ireo, sy nifidianana ihany koa izay birao vaovao hitarika ny holafitry ny vadintany sy ny mpanao lavanty Malagasy.
« Thb Champions League 2018 » Nifarana omaly alahady ny dingana faha-2<<
Nifarana omaly alahady 22 jolay tamin’ny alalan’ny andro faha-5 ny notontosaina tetsy Vontovorona sy tany Fianarantsoa ny dingana faharoa amin’ny “Thb Champions League Malagasy 2018
Baolina kitra vehivavy andro faha-7 Tsuy mbola niova ny filaharana ankapobeny
Tontosa omaly alahady 22 jolay teny amin’ny kianjan’i Carion ny andro faha-7
Ry be sinema mianankavy !
Tsy maintsy hotanterahina ny fifidianana satria izay no voafaritry ny lalàna e !
Tolon’ ny mpampianatra Hisy fanambarana goavana anio
Taorian’ilay fanambarana nataon’ny praiministra Ntsay Christian ny faran’ny herinandro teo mikasika ny fepetra tsy maintsy horaisiny manoloana ireo mpampianatra mitokona dia nanamafy ny sendikan’ny mpampianatra ny faran’ny herinandro teo fa mbola hitohy anio Alatsinainy ny tolona.
Fitsaboana eto An-drenvohitra Paosin-dra 140 isan’andro no ilaina
Mitombo hatrany ny filàn-dra eto amintsika, indrindra fa ny eto an-drenivohitra. Tsy ampy intsony ilay paosin-drà 120 isa isan’andro teo aloha.
“Tsy ny vary no very fa i Madagasikara” Naseho voalohany teny Ankorondrano
Araka ny efa nampanantenain’ny mpamokatra, Voltage production niaraka tamin’ny antoko PSD, tamin’ny fitafana tamin’ny mpanao gazety teny Analakely tamin’ny alakamisy 19 jolay 2018 teo dia notontosaina teny amin’ny Scandal Buffet Akorondrano tamin’ny sabotsy 21 jolay teo ny “avant premier” na fampisehoana savaranonandon’ilay horonantsary nampitondraina ny lohateny hoe :
Manoloana ny lahatsoratra an-gazety izay nialohavana sary nirentirentin’ny zanaky ny filohan’ny tetezamita teo aloha,
Cité Ampefiloha Hifampitsimbina ny samy zokiolona
Tamin’ny sabotsy 21 jolay lasa teo no nampahafantarina tetsy amin’ny Cité Ampefiloha ny hetsika hotanterahin’ny fikambanan’ny zokiolona ao amin’ny volana septambra 2018.
Orinasam-panjakana Harahi-maso akaiky
Nisy ny volavolana didim-panjakana nentina teo anivon’ny fikankevitry ny governemanta tamin’ny farany teo.
Mpitondra eto Madagasikara Tokony ho modely amin’ny fitsitsiana
Iaraha-mahita ny fahantrana lalina mianjady amin’ny firenena. Manoloana izany anefa dia mibaribary ihany koa ary hitan’ny maro ny filibana fandaniam-bola ataon’ny fitondrana.